P1.66 UHD nitarika rindrambaiko fampisehoana rindrambaiko China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:P1.6 HD Làlam-pandeha Video,P1.6 anatiny efijery fisehoana anatiny,P1.6 anatiny anatiny UHD Led Video Wall
Home > Products > UHD Led Screen > Efijery HD Led > P1.66 UHD nitarika rindrambaiko fampisehoana rindrambaiko
Ny teknolojia SMD, izay manapaka ny fitsipika nentin-drazana, dia manana ny antso ao amin'ny tsenan'ny efijery LED. Priva P1.6 UHD Led Video Wall Screenshot dia amboarina amin'ny SMD izay ahitàna ny piksel kely. Kely kokoa ny haben'ireo dioda nitarika dia mety ho kely ny piksel tampoka nitarika rindrina fampisehoana rindrambaiko noho ny fivoaran'ny teknolojia encapsulation. Noho izany, izany no porofo fa ny P1.6 anatiny anatiny UHD Led Screens dia hita avy amin'ny elanelana akaiky indrindra. Izany dia natolotra ao anatin'izany: vahaolana kristaly mazava, endrika endrika soratra, sary, votoaty mihetsika sns.
Ny famoronana rindrina horonantsary anatiny UHD izay azo ampiharina amin'ny fampiasana anatiny. P1.6 Ny rindrina Video an'ny UHD Led anatiny dia azo ampiasaina toy: lobolobo orinasa, studio TV, efitrano fanaraha-maso, efitrano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, seranam-piaramanidina, auditoriums, lobaka orinasa, toerana ara-pivavahana, fampisehoana varotra, fivarotana fivarotana, efitrano fivoriana, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, trano fijerena sarimihetsika sns.
Arsitektur anatiny-tsy latsaky ny tariby
Azo atao ny mampiato ny kabinetra, apetraka amin'ny rindrina, apetraka ary ny tohan-tany
Ny fametahana haingana dia manome fametrahana mora.
Namboarina teo amin'ny toerana nitehirizana ny kofehy teo amin'ilay rindran-tsary dia manome vahaolana famoronana famoronana.
Modules magnetika dia manamboatra modely mora sy mora.
Haavo malefaka avo sy haingam-pandeha ambony na dia hazavana ambany aza.
Flicker maimaim-poana ho an'ny fampiharana alefa.
Ny Black LED dia manolotra fampitahana mifanohitra sy kalitao avo lenta
Ny saron-tava ambany profil dia manolotra zoro kely mijery
Teknolojia fanodinana loko 24bit (ambony indrindra)
Loko mahafinaritra sy famirapiratra marevaka
Tafidina hatramin'ny 3840Hz ny tahan'ny fanavaozana
Fampitahana mifanohitra- 5000: 1
Mora ny nahazoana isa 16: 9 miaraka amin'ny haben'ny kabinetra 400mmx300mm
Fampisehoana seho tonga lafatra
Afaka mahazo fampisehoana FHD sy 4K mora foana
Fivoriana malefaka eo anelanelan'ny kabinetra
Toe- javatra fampiharana
Product Categories : UHD Led Screen > Efijery HD Led
UHD P1.66 Indoor LED rindrambaiko fitaratra
P1.6 HD Làlam-pandeha Video
P1.6 anatiny efijery fisehoana anatiny
P1.6 anatiny anatiny UHD Led Video Wall
4K LED Mpanova Video